Xisbiga Wadajir oo ku garab istaagay Dowladda Soomaaliya sida ay ugu jawaabtay Kiinya – Kalfadhi
Xisbiga Wadajir oo ku garab istaagay Dowladda Soomaaliya sida ay ugu jawaabtay Kiinya
Xisbiga Wadajir ayaa soo dhaweeyey go’aankii ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ka qaadatay hakinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ay Kiinya ku dhawaaqday maalin ka hor. Wadajir waxay sheegtay iney Dowladda Soomaaliya ku garab taagan tahay ilaalinta wadajirka, midnimada xuduudaha dhulka iyo Madax-banaanida Qaranka Soomaaliya.
“Wuxuu xisbigu taageersan yahay xaqnimada dacwadda ay Dowladda Soomaaliya u gudbisay Maxkamadda Cadaaladda Aduunka, labada dowladoodna waa in ay u hogaansamaan go’aanka maxkamadda” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed uu Xisbiga Wadajir soo saaray goordhaweed.
Wadajir waxay sheegtay in ay garwaaqsan tahay xiriirka soojireenka ah ee leh derisnimada iyo saaxiibtinimada “iyo kaalint ay Dowladda Kiinya ka qaadatay” buu yiri “dhismaha nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya”. Waxa uu xisbigu sheegay inuu ku baaqayo in la ilaaliyo deris wanaagga, lana adkeeyo xiriirka diblomaasiyadeed, iyada oo la xoojinayo iskaashiga labada dal.
Warsaxaafadeedka uu Xisbiga Wadajir soo saaray, oo uu Hogaamiyaha Xisbigaas Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ku daabacy Boggiisa Feysbuugga, waxaa loogu baaqay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) in arrimaha masiiriga ah ee taabanaya aayaha dalka ay ku maareyso wadatashi iyo daah-furnaan, “si loo helo” baa lagu yiri warsaxaafadeedkaas “mowqif mideysan oo kalsooni gelin kara shacabka Soomaaliyeed”.
Hogaamiyaha Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
Xisbigan, oo ay dad badan oo uu ka mid yahay hogaankiisa rumeysan yihiin inuu yahay kan ay Dowladda Farmaajo isaga ilaalis badan tahay, ayaa teer iyo shalay dad fara badan Baraha Bulshada isla dhex marayeen sababta uu Hogaamiyihiisa, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, uga aamunsan yahay go’aanka ay Kiinya qaadatay, iyaga oo muujinayey in dhacdooyinka kale uu islamarkiiba ka sameyn jiray dhigaallo.
Hase ahaatee, dad badan oo kale ayaa faafiyey warsaxaafadeed lagu sheegay in ay ku mideysan yihiin Xisbiyada Wadajir, UPD iyo Himila Qaran, taas oo uu Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, oo ka mid ah UPD, beeniyey, kana dalbaday warbaahintii daabacday warkaas oo uu ku tilmaamay mid uu sameeyey “Cabdalla Shiddeeye” iney ka cadurdaartaan.
Warsaxaafadeedka uu Xisbiga Wadajir ka soo saaray go’aanka Soomaaliya ee Kiinya
Sanatar ka tirsan Aqalka Sare oo beeniyey inuu Soomaaliya kala saftay Kiinya